सिके राउत : ७ सवाल, ३ सरप्राइज ! – sagunkhabar.com
भोलि पनि सिके राउतले सरप्राइज दिने निर्णय गर्दैनन् जस्तो लाग्दैन । किनभने, धेरै तीक्ष्ण बुद्धिको मान्छे हरेक काम कुरा बडो स्मार्ट तरिकाबाट गर्न खोज्छन् । सरप्राइज दिन खोज्ने उनीहरुको ठूलो अभिलाशा हुन्छ
एजेण्डा छाडेर सिके राउतले नराम्रो गरेको म भन्दिनँ, राम्रो नै गरेका छन् । तर अब झेल गर्ने कि अगाडि बढ्ने ? बल सिके राउतका हातमा छ। यदि उनी अझै पनि सरकारले जनमत संग्रहलाई नै मानेको छ भन्दै हिँड्छन् भने परिस्थिति फागुन २३ अघिको अवस्थामा पुग्ने छ । अर्थात यो सहमतिको कुनै अर्थ नै रहँदैन ।
भारतीय अर्बपतिका छोरोको विवाहमा गरिब एवं अनाथलाई भोज